jeudi, 02 mai 2019 14:53
Ivato: Tonga ny helikoptera voalohany ho an’ny Tafika Malagasy
Helikoptera amin’ny karazany Ecureuil EC B3 ity tonga ity, ary mbola mitondra laharana atsy afrikana tatsimo (ZS RWC).
jeudi, 02 mai 2019 10:31
Iavoloha: Antsoina hivory eny ireo mpanolo-tsaina
Antsoina eny Iavoloha ireo mpanolo-tsainan'ny ministera. Maro ireo tsy mbola misy fanendrena hatreto.
Toy ny Angano sisa izany fahatapapatapahan-jiro na delestazy izany any Alemaina. Efa 32 taona izao tsy nisy delestazy tany an-toerana. (Jereo Sary Tohiny)
Fambolen-kazo no nanamarika ny fankalazana ny Fetin’ny Asa androany 1 mey taty Manakara. Nanamaloka izany ny lozam-pifamoivoizana nitranga tamin’ny lalam-pirenena faha-12 tao Mijilo. Niala bisikilety ny fiaraben’ny BNGRC nitondra miaramila avy namboly hazo tany Analavory, ka nivadika. Nisy ny namoy ny ainy, maro ny naratra tsaboina ao amin’ny hopitaliben’i Manakara.
Tao amin’ny Fokontany Tanimbaritsara, Kaominina Mahazomà, Faritra Betsiboka no nitranga ity fakana ankeriny ity ny talata 30 aprily 2019 tokony ho tamin’ny 8ora alina. Efa-dahy no voalaza fa nanatanteraka izao fakana an-keriny vehivavy bevohoka, manodidina telopolo taona efa miandry andro ho teraka izao. Nametraka laharana finday ireo olon-dratsy taorian’ny nandehanany. Rehefa nantsoin’ny raim-pianakaviana io laharana io dia nisy nandray tokoa, ary « nilaza fa aty aminay ny vadinao », avy eo tsy tratr'antso intsony ilay finday. Tsy mbola tafaverina eo anivon’ny fianakaviana ilay ramatoa, hatramin’ny maraina teo, nahazoana ny vaovao. Isany manana omby betsaka ao an-tanàna ity fianakaviana lasibatry ny fakana an-keriny ity.
mercredi, 01 mai 2019 09:13
SECES Sampana Antananarivo: Hiverina hampianatra manomboka ny 2 mey 2019
Nanao fanambarana ny SECES Sampana Antananarivo omaly, tamin’ny alalan’ny Pr Ravelonirina Sammy Grégoire, filohany, milaza fa «miverina ny asa fampianarana sy fikarohana manerana ny Oniversiten’Antananarivo sy ny Foibem-pikarohana nasionaly manomboka ny 2 mey 2019 ». Efa hita taratra, hoy ny fanambarana, ny finiavan’ny fitondrana eo amin’ny famahana ny olana misy ety amin’ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa, momba ny fanatanterahana ny zo aman-kasin’ny mpampianatra-mpikaroka sy ny mpikaroka-mpampiantra, ary indrindra ny kalitaon’ny asa fampianarana sy fikarohana. Hatsangana ato anatin’ny fotoana fohy ny rafitra fampiharana (Comité Ad’hoc) ani’ireo vahaolana nifanarahana. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 01 mai 2019 08:46
CFM Ampefiloha: Fanaovan-tsonia ho an'ireo kandida ho solombavambahoaka
Notanterahina tetsy amin'ny foibe-toeran'ny Comité Fampihavanana Malagasy, CFM, omaly talata 30 aprily ny fifanaovan-tsonia teo amin'ireo kandida ho solombavambahoaka sy ny teo anivon'ireo ratsamangaikam-panjakana misahana ny fifidianana, ny fitantanana, ny demokrasia. (Jereo Sary Tohiny)
Araka ny loharanom-baovao samihafa dia tsy mbola hisy fiovana ny vidin-tsolika eny amin'ireo toby mpaninjara solika. Miandry fihaonan'ny filohan'ny Repoblika sy ireo mpandraharaha mpanafatra solika, araka ny voalaza tamin'ny alahady 28 aprily tao amin'ny Lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina. Vidin-tsolika ankehitriny, efa nihatra hatramin'ny 4 desambra 2018: Lasantsy : 4200 ArGazoala : 3550 ArSolitany : 2630 Ar
Tonga omaly alatsinainy maraina teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ireo fonosana lehibe miisa 252 misy ireo antontan-taratasin-datsabato hampiasaina amin'ny fifidianana Solombavambahoaka, izay natonta tatsy Afrika Atsimo. Ny famokarana sy ny fitaterana ireto antontan-taratasin-datsabato ireto dia notohanan'ny kitapom-bola SACEM (Soutien au Cycle Électoral de Madagascar). Hapetraka amina toerana fitahirizana azo antoka ireto fitaovana ireto mandra-pahatongan'ny fotoana izay efa napetraky ny CENI foibe hanapariahana ireo fitaovana isaky ny biraom-pifidianana. (Jereo Sary Tohiny)
Vita androany ny fifamindram-pahefana teo amin’ny Iouri Garisse Razafindrakoto, Tale jeneralin’ny hetra teo aloha sy Atoa Germain, Tale jeneraly vaovao. Nanambara ny Tale jeneraly vaovao fa vonona ny hanohy ny fanovana natomboky ny Tale jeneraly nodimbiasany toerana izy amin’ny fampitomboana ny hetra miditra amin’ny kitapombolam-panjakana. Nilaza i Germain fa ny mangarahara no hitantanany, ao anatin’ny fanajana ny fahaiza-mitantana. (Jereo Sary Tohiny)
Page 12 sur 422